Kungenzeka ukuthi uqedele wonke amazinga ngonyaka emfundweni yaseJalimane. Mangaki amazinga ngesiJalimane nokuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukusuka ezingeni elilodwa uye kwelandelayo aphakathi kwezihloko ezifuna ukwazi kakhulu kulabo abafuna ukufunda isiJalimane. Ungathola imininingwane ngalezi zihloko ezinelukuluku ngendatshana yethu enamazinga olimi abhalwe ngesiJalimane.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukufunda isiJalimane?
Labo abafuna ukufunda isiJalimane bagcwalisa amazinga we-0 aqala kusuka ku-A2 kuye ku-C7. Lawa mazinga anqunywa ngokuya ngamazinga e-European Union. Ukuze unqume ileveli yakho ngokufanele futhi uqale isifundo ekilasini elifanele, ukuhlolwa kokubekwa kuqala ekuqaleni. Abaqalayo bathathwa ngqo ezingeni le-A0. Sizozama ukukhombisa wonke amaqembu ezingeni kanye nobude bokuqeqeshwa obungezansi, njengoba kuyehluka ngokuthi kungaqedwa isikhathi esingakanani ngokwamazinga.
Izinga labaqalayo le-A0: Leli zinga liyisisekelo sokungena okuyisisekelo lapho kulungiselelwa khona ukufunda ulimi lwesiJalimane ngokujwayelekile, izinhlamvu zamagama, imithetho yokupela, namanye amaphethini athile agcizelelwayo. Ezifundweni eziningi, ukuqeqeshwa kuqala ngqo ezingeni le-A1, kepha kunezinto ezithile odinga ukuzazi ukuze ufike ku-A1.
Izinga labaqalayo le-A1: Leli banga lesifundo elijwayelekile liqedwa cishe emavikini ayisishiyagalombili ngamahora angama-20 okuqeqeshwa ngesonto. Eqenjini le-Intensivkurs, kuqedwa izifundo ezingama-8 ngesonto cishe emasontweni angama-30.
Izinga A2 Elementary German: Kuleli qembu lezinga, iqembu lesifundo elijwayelekile liyaqedwa ekupheleni kwamasonto cishe ayi-20 namahora angama-8 okuqeqeshwa ngesonto, kanti iqembu lesifundo se-Intensiv liphothulwa cishe emavikini ayisithupha ngezifundo ezingama-30 ngeviki.
Izinga le-B1 eliPhakathi laseJalimane: Kuleli qembu leleveli, inqubo isebenza ngendlela efanayo nakumazinga we-A1 ne-A2.
Izinga laseJalimane Elingenhla Eliphakathi Naphakathi: Kuleli qembu lezinga, iqembu lesifundo elijwayelekile liyaqedwa ekupheleni kwamasonto angaba yishumi ngamahora angama-20 okuqeqeshwa ngesonto, kuthi iqembu lezifundo ze-Intensiv liphothulwe cishe emavikini ayisithupha namakilasi angama-10 ngeviki.
Izinga le-C1 Elithuthukisiwe laseJalimane: Ngenkathi isikhathi esivamile sokuqedwa kweqembu lesifundo singahlukahluka ngokwabafundi abakuleli qembu, ukuqeqeshwa kweqembu le-Intensiv kuqedwa esikhathini esingamasonto ayisithupha.
Izinga Lobuchwepheshe beC2 laseJalimane: Yiqembu lokugcina lamazinga olimi lwesiJalimane. Isikhathi sokuqeqeshwa kuleli qembu siyahluka ngokuya ngokusebenza komuntu ngamunye.
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-10 ezedlule, ngoFebhuwari 14, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngo-Ephreli 20, 2021.
IsiJalimane uKeloğlan und Nasreddin Hodja - Ngokuhumusha kwesiTurkey
Ukuhlanganiswa kwesenzo seHaben
Izinhlobo zemisho nezigwebo ngesiJalimane (Satztypen)
Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe German Präpositionen mit zwei Kasus (Dativ und Akkusativ)
Umehluko weJalimane Konjunktiv 1 noKonjuktiv 2
Izihlanganisi nezigaba zesikhathi ngesiJalimane
Izenzo ezivuselelekayo namazwibela ngesiJalimane
UDer Relativsatz - Etwas Prazisieren